जनप्रतिनिधिहरुको महँगा गाडी मोह - मुखमा मोइ छैन चाकमा तेल - Baikalpikkhabar
जनप्रतिनिधिहरुको महँगा गाडी मोह – मुखमा मोइ छैन चाकमा तेल
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगीले आफ्ना लागि रु.१ करोड ४५ लाखको मित्सुविसीको पजेरो किने । मेयर निर्वा्चित भएपछि १२ असोज २०७४ मा पत्रकार सम्मेलन गरी गाडी, तलब–भत्ता सुविधा नलिने घोषणा गरेका उनले महानगरमा गाडी हुँदाहुँदै आर्थिक वर्ष ०७५र७६ को अन्तिममा ना १ झ १६९८ नम्बरको नयाँ गाडी किनेका हुन् ।
गाडी खरीदका लागि सात वटै प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्य्विधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्दे्शिका २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । त्यो निर्दे्शिकामा सरकारी सवारी साधन खरीद सम्बन्धी प्रक्रिया र मापदण्ड तय गरिएको छ । जस अनुसार, मुख्यमन्त्री वा समानस्तरका पदाधिकारीले रु.१ करोडसम्मको गाडी खरीद गर्न सक्छन् । प्रदेश–१ को निर्दे्शिकाको ११ तथा प्रदेश–५ को ९ नम्बर बुँदामा सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री र मन्त्रीस्तर तथा प्रमुख सचिवलाई रु.७५ लाख, सचिवलाई रु.६० लाख, महाशाखा प्रमुखरकार्यालय प्रमुखलाई रु.४५ लाखसम्मका गाडी खरीद गर्न सकिने उल्लेख छ ।
जनप्रतिनिधिले आफूखुशी महँगा गाडी खरीद गर्न थालेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले त्यसलाई नियमन गर्न एक वर्षअघि कार्य्विधि मस्यौदा गरेको थियो । सह–सचिव सुरेश अधिकारी नेतृत्वको पाँच सदस्यीय समितिले तयार गरेको त्यो मस्यौदा स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइयो पनि । तर, अहिलेसम्म त्यो अगाडि बढेन । “मस्यौदा तयार गरेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको थियो, त्यहीं अड्कियो ।” हाल प्रदेश–१ का प्रमुख सचिव रहेका अधिकारी भन्छन्, “कार्य्विधिको मस्यौदा कसको चाहनामा किन रोकियो ? थाहा भएन ।”
मेयर –उपमेयरलाई ‘विशेष’ गाडी
भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहाल बा २ झ १४६२ नम्बरको ल्याण्डक्रुजर चढ्छिन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्र सुवेदीका अनुसार यसको बजार मूल्य रु.१ करोड ६३ लाख पर्छ । तर, रेणु महानगरमा निर्वा्चित हुनुअघि नै त्यो गाडी खरीद गरिएको उनले बताइन् । महँगो गाडी सम्बन्धी प्रश्नमा मेयर रेणु भन्छिन्, “मसँग उल्टोपाल्टो कुरा गर्ने समय छैन । हामी विकासका लागि खटेका छौं । महानगरसँग जे थियो, त्यसैलाई प्रयोगमा ल्याएका हौं । धेरै हिंड्नुपर्ने भएकाले पनि गाडी त चढ्नै प¥यो, होइन र ?”
मंगलसेन न्यून बजेट भएको नगरपालिकामा पर्छ । बोहोराका अनुसार चालु आवको वार्षिक बजेट रु.२८ करोड छ । तर, आउँदो आव २०७६र७७ मा वार्षिक बजेट थपिएर रु.३२ करोड पुगेको छ । मेयरले महँगो गाडी खरीद गरेपछि त्यसको चर्को विरोध मात्र भएन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव) ले त्यो गाडी नै ध्वस्त बनाइदियो ।
मेयरका लागि गाडी किन्न आव २०७५र७६ को नगरसभाले रु.६० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसले नपुुगेर विकास बजेटबाट रकमान्तर गरेर रु.१ करोड २१ लाखको गाडी किनिएको थियो ।
महँगो गाडी किन किन्नु प¥यो ? मेयर बोहोराको आफ्नै तर्क छ । उनी भन्छन्, “मंगलसेन सदरमुकाम भएका कारण भीआईपीहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश आउने–जाने गर्छन् । उहाँहरूको लागि सुविधा होस् भनेर महँगो गाडी खरीद गरेका थियौं ।” तर, ‘उच्चपदस्थ’ ले मेयरको त्यो गाडी चढ्नै नपाई खरानी भयो , मंगलसेन नगरपालिकाले गाडीको बीमा दाबी गरेको छ । बीमा रकम पाएपछि फेरि त्यति नै मूल्यको नयाँ गाडी खरीद गर्ने योजना नगरपालिकाको छ । जनप्रतिनिधि आएपछि एउटा एम्बुलेन्स किनिएको छ । भएको एउटा पुरानो दमकल सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ ।
नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरका मेयर राजेन्द्ररमण खनालले आर्थिक वर्ष २०७४र७५ को बजेटबाट टोयोटा कम्पनीको बा२झ ४३९९ हाइलक्स खरीद गरे । सूचनाप्रविधि अधिकृत सुजनकुमार डोटेलका अनुसार यो गाडीको बजार मूल्य रु.८० लाख छ । गाडी खरीदपछि स्थानीयस्तरमा उनको आलोचना भयो । पहाडमा सजिलो हुने भएकोले त्यो गाडी खरीद गरेको मेयर खनालको तर्क छ ।
“हामीसँग वारुणयन्त्र थिएन, अन्यत्रबाट आउन समय लाग्यो” मेयर शेर्माले भने, “यस घटनापछि हामीले केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई बारम्बार घच्घच्याइरहेका छौं ।” प्रदेश सरकारले दिने वारुणयन्त्र संचालनका लागि आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा नगरसभाबाट रु.२० लाख बजेट पनि छुट्याएको मेयरले जानकारी दिए । मेयर शेर्मा इसुजुको मे १ झ १५४ नम्बरको गाडी चढ्छन् । यो गाडी रु.६४ लाखमा खरीद गरिएको मेयरले जानकारी दिए ।
खोजपत्रकारिता केन्द्रकालागी मनोज श्रेष्ठद्धारा तयार गरिएको रिपोर्टका आधारीत
आइतबार, १९ साउन, २०७६, बिहानको ०९:५४ बजे